Malunga nathi-Hebei Mingda International Trading Co, Ltd.
Hebei Mingda Inkampani yokuRhweba yaMazwe ngaMazwe yinkampani yorhwebo ekhethekileyo ekubunjweni, kuxolelwa nakwinxalenye yomatshini.
Sinonxibelelwano olunzulu lokushishina kunye nokwenziwa kwizixeko ezikhulu zase China, kunjalo nje siyaguquguquka kwaye sithembile ukuba naluphi na uhlobo lweemveliso zokuphosa ukuze sikwazi ukudibana nabathengi bethu kwiquanlity kunye nexesha lokuhanjiswa.
I-Hebei Mingda International Trade Company isebenza njengenkampani ekhethekileyo kwicandelo zonke iintlobo zokuphoswa.
OKO SINOKUKWENZA KUWE
Iimveliso zethu zibandakanya zonke iintlobo zokuphoswa eluhlaza ukuba kwenziwe i-ductile iron, i-grey iron, ubhedu, intsimbi engenanto kunye ne-aluminium, ukuphosa izixhobo ezenziwe ngomatshini kunye neenxalenye ezenziwe ngazo. Ukwenza la malungiselelo ngokwemizobo yabathengi, sinobugcisa obufanelekileyo bokuvelisa kunye nezixhobo, ezinje nge-resin sand, isikhunta sesanti, iibhokisi eziphambili ezishushu, i-wax elahlekileyo, elahlekileyo-yintsimbi njalo njalo.
Ngokukodwa kwimizimba ye-hydrant kunye nee-valves 'body, siqokelele amava acebileyo kwezi mveliso kunyaka ophelileyo wemveliso eyi-16, Ngoku sinebhongo ngeemveliso zethu ngomphezulu kunye nezinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni. Nokuba kwenzeka ntoni, sizama konke okusemandleni ukubonelela abathengi bethu ngexabiso eliphambili ngokuphucula ubugcisa bemveliso kunye nolawulo olunobulunga obulunge ngakumbi.
Ngaphandle kweemfuno zabathengi, sikwanayo nenkqubo yethu yokuqinisekisa umgangatho oqinisekileyo, Oko kuqinisekisa ukuba ibango lomthengi libaluleke ngakumbi kwaye linokwenziwa ngokuchanekileyo ngokwemigangatho yemigangatho yethu ilungisiweyo. Oku kugcina ixesha elininzi kunye nemali kumacala omabini. Ukusukela ekusekweni ukuza kuthi ga ngoku, iimveliso zethu ziyavunywa ngokusemthethweni ngabathengi bethu, ngaxeshanye siphumelela igama elihle kwimizi-mveliso yokuphoswa koomatshini nabani na ovela kubathengi okanye kumaqabane ethu.
Ngoku iimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa eJamani, eSweden, e-UK, eDenmark, eFrance, e-USA, eMbindi-Mpuma, njalo njalo.
Sinokhetho oluninzi lweefektri kunye neendawo zokusebenza kunye nathi eChina, kusinceda ukuba sazi ukuba ngowuphi umsebenzi wobugcisa kwaye yeyiphi indawo efanelekileyo efanelekileyo kubathengi bethu abaziimveliso ngokwemizobo abanikiweyo kunye nemfuneko yomgangatho. Ke oku kusinika umda ngaphezulu kwabanye ukuba abathengi bahlala befumana eyona mveliso ilungileyo ngexabiso elifanelekileyo lokukhuphisana.
UkuHanjiswa / IXESHA LOKUGQIBELA
Ixesha lethu eliqhelekileyo lokukhokela ziintsuku ezingama-30 kodwa kwimeko ekhethekileyo kwiimfuno zomthengi, Singenza into engaqhelekanga kwiintsuku ezingama-20 nje ukuze sisindise umthengi wethu oxabisekileyo kumthwalo weendleko ezongeziweyo zohambo lomoya.
Ukukhangela phambili ekufumaneni uKhetho lwakho oluKhethileyo ngempendulo yakho kwasekuqaleni!